Maungtintyin: ဘ၀ဟာ တရားမျှတသလား? တရားမမျှတဘူးလား?
ဘ၀ဟာ တရားမျှတသလား? တရားမမျှတဘူးလား?
ဖြစ်တည်ခြင်းက တရားမျှတခြင်းနှင့် သမာသမတ်ရှိခြင်းကို ယုံကြည်ပါသလား? သဘာဝတရားက တရားမျှတခြင်းရှိတယ်-ဆိုတဲ့ ဖွဲ့စည်းမှုစနစ်တစ်ခုအရ ကမ္ဘာဟာ ပြေးသွားနေသလား? ဒီလိုမှမဟုတ် ဒီနေရာမှာ အရာရာတိုင်းဟာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ဖြစ်သလား? ဒါမှမဟုတ် အလျဉ်းသင့်သလို ဖြစ်သလား? အဲသလိုမှမဟုတ် ဖရိုဖရဲပရမ်းပတာအခြေအနေတွေနဲ့လား? ဒီအရာများက အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စိတ်သို့ မကြာခဏလာတဲ့ မေးခွန်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးအားဖြင့်တော့ အကျွန်ုပ်တို့ ၀န်းကျင်မှာ တရားမမျှတ မှုတွေ တွေ့မြင် ရတဲ့အခါမှာပါ။
အကျွန်ုပ်တို့များစွာက ဘ၀ဟာ အမြဲတမ်း မျှတခြင်းမရှိ- ဆိုတာ ပြောဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ လူအများ- အဖြစ်အပျက် များ- ဖြစ်စဉ်များ- အခြေအနေများကို ဆန့်ကျင်ကာ- မကျေနပ်ချက်များဖြင့် အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုယ် တည်နေပုံရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကျွန်ုပ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လူတိုင်းက သဘာဝဆိုင်ရာတရားမျှတမှုဟာ တကယ် တည်ရှိတယ်-ဆိုတာ ယုံကြည်ချင်ကြမှာပါ။
တစ်ဦးတစ်ယောက်က အကျွန်ုပ်တို့ကို စော်ကားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အခြားသူများကို တကယ်ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့အခါ- အကျွန်ုပ်တို့ဟာ တရားမျှတမှုကို လိုချင်ကြပါတယ်။ သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ်တို့ကလည်းပဲ တရားမျှတမှုဟာ အချိန်တိုင်း ပြုလုပ်တာမဟုတ်- ဆိုတာ သိနားလည်းကြပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်က အကျွန်ုပ်တို့ကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ- ဒီလိုမှမဟုတ် နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ထိခိုက်စေပြီးဖြစ် လျင်- အသွင်သဏ္ဍာန်အချို့မှာ ထိခိုက်ခံစားနေဖို့ အဲဒီသူများကို ဒါမှမဟုတ် အခြားသူများကို အမြဲတမ်းရှာဖွေနေပါတယ်။
ပြီးတော့ အကျွန်ုပ်တို့ကိုယ့်ကိုယ် တရားမျှတခြင်းကို စီရင်ချက်ချပေးဖို့ ရည်မှန်းချက်ထားရှိကြသလို- အကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ နှိပ်စက်က လူညှဉ်းဆဲသူကို ဆန့်ကျင်လျက်အခြားဘက်မှ ဘုရားသခင်ကဲ့သို့သောကြားဝင်စွက်ဖက်ခြင်းကို မျော်လင့်ကြ ပါတယ်။
နှိုင်းယှဉ်တာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်တာဟာ အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့သဘာဝ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် များစွာ ငွေကြေးချမ်းသာနေတဲ့- များပြားတဲ့ဥစ္စာ ရှိနေတဲ့- ဆွေကြီးမျိုးကြီးရှိနေတဲ့- ကျန်းမာရေးကောင်းနေတဲ့ အခြားသူများကို အကျွန်ုပ်တို့ မြင်ရတဲ့အခါမှာ စိတ်ဓာတ်ကျစွာ ခံစားနေရပါတယ်။
အဆိုပါကာလမှနောက် အကျွန်ုပ်တို့ဟာ သူတို့ဘ၀များရဲ့ အပြစ်အနာအဆာ ပျော့ကွက်ဟာကွက် အချို့ကို ကြိုစားပြီး ရှာဖွေကြပါတယ်။ သူတို့နှင့် အဆင်မပြေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေကို ရှာကြည့်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဘ၀ရဲ့အချို့နယ်ပယ်များမှာ သူတို့ထက် အကောင်းဆုံး ဘယ်လို ကျန်သေးသလဲ ရှိသေးသလဲဆိုတာကို ကြိုးစားပြီး ကြည့်မြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အခြားသူများထံမှာပါ။
ပြီးတော့ သိစိတ်ကဖြစ်စေ မသိစိတ်ကဖြစ်စေ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ- ဆိုးဝါးတဲ့တစ်စုံတစ်ခုက သူတို့ကို ဖြစ်သွားစေဖို့- မကြာခဏ အလှိုဆန္ဒရှိကြပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ အကျွန်ုပ်တို့ထက် သိသာပေါ်လွင်တဲ့ဘ၀တစ်ခု အခြားသူများမှာ ရှိနေသင့်တယ်ဆိုတာ မျှတမှုရှိတဲ့ပုံ မပေါက်လို့ပါ။
သို့သော်လည်း ဖြစ်တည်ခြင်းက အကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်များ- ဆန္ဒများ- လိုချင်မှုများ- ထင်မြင်မှုများ- ယုံကြည်မှုများ အတိုင်း- အလုပ် မလုပ်ပါ။ အမှန်အားဖြင့်- ဖြစ်တည်ခြင်းဟာ ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်- ဆိုတာ- သူအလုပ်လုပ်တဲ့ လမ်းမှာ အကျွန်ုပ်တို့အသီးသီးအတွက် ဘာ့ကြောင့် လိပ်ထားခေါက်ထားတယ်- ဆိုတာ- တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ တကယ် သေသေ ချာချာ မသိပါ။
အချို့က အဲဒါကို ကံကြမ္မာလို့ ခေါ်နိုင်ပေမယ့်- အခြားသူများက အတိတ်ဘ၀ကမ္မ- ကံ- အခွင့်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ အခြားသူများ ကတော့ အဲဒါဟာ ဆင်နွှဲသွားနေတဲ့ အကြောင်းအကျိုးတို့ရဲ့ဥပဒေသဖြစ်တယ်-ဆိုတာ ပြောဆိုနေကြဆဲပါ။
ယနေ့ အကျိုးကျေးဇူးအချို့ကို ရရှိနေတဲ့သူများဟာ အတိတ်ဘ၀များမှာ ကောင်းတာအချို့ကို ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ရမည်- ဆိုတာ၊ ပြီးတော့ သူ့ရဲ့အတိတ်ကောင်းခဲ့တာများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆုလဒ်များကို ရိတ်သိမ်းနေတယ်- ဆိုတာ သင် ထင်မြင်ခံ စားပြီး ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် ပါတယ်။
နောက်ပြီး အဲဒါ့ကြောင့် အကျွန်ုပ်တို့ကလေးတွေကို- သူတို့ဟာ ကောင်းရမည်- ရိုးသားရမည်- နှိမ့်ချရမည်- ပေးကမ်းရမည်- တရားမျှတ ရမည်- ခွင့်လွှတ်ရမည်- ဆိုတာ အကျွန်ုပ်တို့က အကြံပြုကြပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့များစွာဟာ ကောင်းကောင်းနေထိုင်ပေမယ့်လည်း- ရိုးရိုးသားသား နေထိုင်ပေမယ့်လည်း- ဖြစ်တည်ခြင်းက အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာ သူ့ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကို ရွာသွန်းပေးချပုံမပေါ်ပါ။ အဲဒီအခါ ဘ၀က မမျှတပါလား-လို့ အကျွန်ုပ်တို့ဟာ အံသြလာပါတယ်။
အစစ်အမှန်က ဘ၀ဟာ ဒါမှမဟုတ် ဖြစ်တည်ခြင်းဟာ တရားမျှတတာလည်းမဟုတ်- မမျှတတာလည်း မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်တည်ခြင်း ဟာ ဖြစ်ရုံမျှသာပါ။ ဘ၀ကတော့ အဲဒါရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်တဲ့အတိုင်း စီးဆင်းနေပါတယ်။ အကျွန်ုပ်တို့အသီးသီးအတွက် ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ စက္ကန်းတိုင်း- ဘ၀ဟာ ဘယ်လို အစီအစဉ်တကျ သွားနေသလဲဆိုတာ-နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်ရှိတဲ့- အကြီး အကဲ အသေးစိတ်ရေးဆွဲထားတဲ့ တစ်နေရာရာ ရှိသလား?
အဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ခိုင်လုံတဲ့လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်များ ဒါမှမဟုတ် သက်သေအထောက်အထား မရှိပါ။ အစစ်အမှန် အားဖြင့် ဖြစ်တည်ခြင်းဟာ အခြားသူများထက်ပိုပြီး ဘယ်သူကိုမှ အခွင့်အရေး မပေးပါ။ Swami Vivekananda က ပြောဆိုလိမ့်မယ် ဖြစ်တာက- ဒီစကြ၀ဠာမှာ အဏုမြူအက်တမ်တစ်ခုတောင် အဲဒါက ဘယ်လိုဖြစ်တယ် ဆိုတာ ထက် ခြားနားဆန်းသစ်တာ မဖြစ်ပါ။ အကြောင်းက အဲဒါက စကြ၀ဠာရဲ့ ချိန်ခွင်လျာကို ဖျက်ဆီးလိမ့်မယ်။ စနစ်တစ်ခု လုံးဟာ ပြိုလဲလိမ့်မယ်-ဆိုတာပါပဲ။
နုးနုးညံ့ညံ့ပြေးလွှားတဲ့ စကြ၀ဠာတစ်ခုအနေဖြင့်- အဖြစ်အပျက်များနှင့် ဖြစ်စဉ်များဟာ စိတ်ချသေချာနိုင်တဲ့လမ်းတစ်ခု မှာ ဖြစ်ရ ပါမယ့်။ ပြီးတော့ ဖြောင့်တန်းတည့်မတ်တဲ့လိုင်းမှာ ဘ၀ဟာ မရွေ့လျားပါ။ ဒါပေမယ့် တိကျတဲ့သံသရာ စက်ဝန်းမှာတော့ ရွေ့လျားပါတယ်။ ချမ်းသာခြင်းနှင့် ဆင်းရဲခြင်း- ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုးခြင်း- ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်း- ရှင်သန်ခြင်းနှင့် သေဆုံးခြင်း- ဒီအရာအားလုံးဟာ သံသရာအ၀န်းအ၀ိုင်းကလာတယ် ဆိုတဲ့ ဘ၀ကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်- အကျွန်ုပ်တို့ ဒါတွေကို သိရှိလာရပါတယ်။
ဘ၀ဟာ မျှတပုံမပေါ်ပေမယ့်လည်း- အသီးသီးပုဂိုလ်ရဲ့ တောင့်တမှုနဲ့ အလိုဆန္ဒအရ အရာဝတ္ထုတွေဟာ ပြောင်းလဲခဲ့လျင်- အကျိုး ဆက်ဖြစ်လာမယ့် ပရမ်းပတာ ဖြစ်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုတွေကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ နေ့ရက်အချို့ထက်မပို- ကမ္ဘာကြီးဟာ အဆုံးတစ်ခုသို့ လားရောက်ပါလိမ့်မယ်။ အကျွန်ုပ်တို့မြင်တဲ့ အပြင်ပန်းအားဖြင့်ဖြစ်တဲ့ မမျှတမှုကို အချိတ်အဆက်မှန်မှန် ဆက်စပ်မှုအတွက် ဆက်လက် လိုအပ်နေဆဲပါ။
Posted by Maungtinyin (မောင်တင့်ယဉ်) at Saturday, December 31, 2011
စိုးရိမ်မှုသည် ပြဿနာများစွာကို ဖန်တီးသည်